Chain ndiro manyowa anotendeuka inomhanyisa kuita kwekuora kwemarara marara. Zviri nyore kushanda uye zvine hunyanzvi hwakakura, saka ichi composting michina inoshandiswa zvakanyanya kwete chete mu organic fetiraiza yekugadzira chirimwa, asiwo mupurazi composting.
Kuongorora usati waita bvunzo kumhanya
Wongorora kana redu reductor nemapoinzi ekuzora akazorwa mafuta zvakakwana.
◇ Tarisa magetsi emagetsi. Rated voltage: 380v, kumanikidza kudonha hakufanirwe kunge kuri pasi pe15% (320v), isina kukwira kupfuura 5% (400v). Pane imwe nguva inopfuura iyi, kutyaira hakubvumirwi
◇ Wotarisa kana kubatana kwemota nemagetsi kwakachengeteka, uye kumisa mota newaya kuti uve nechokwadi chekuchengeteka.
Tarisa kana majoini ese nekubatanidza mabhaudhi akaomarara. Ndokumbira usimbise kana vakasununguka.
Tarisa kukwirira kwemurwi.
Kuitisa iyo Bvunzo Kumhanya pasina Mutoro
Kuisa iyo composting michina kushanda. Misa mutumbi wekutendeuka nekukasira kana kutenderera kwachinja, wobva wachinja kutenderera kwekutenderera kwetatu-chikamu wedunhu kubatana. Panguva yekushanda, teerera kana chinodzora chine mutsindo usina kujairika, bata tembiricha inobata kuti uone kana iri muchikamu chekupisa, uye uchiona kana paine kukakavadzana pakati peye helical kusanganisa blade nepasi pevhu.
Kwayedza Kumhanya neMutoro
① Tanga iyo manyowa wemupango Turner uye pombi ye hydraulic. Kuisa cheni yeplate zvishoma nezvishoma kusvika pasi pekuvirisa tangi, kugadzirisa chinzvimbo checheni yeketani zvinoenderana nekutsetseka kwevhu: chengetedza manyowa ekucheresa mashizha 30mm pamusoro pevhu kamwe kukanganisa kwakabatana kwepasi pasi pe15mm. Kana yakakwira kupfuura 15mm, iwo mashizha anogona kungochengeta 50mm pamusoro pevhu. Munguva yekuumba manyowa, apo mashizha arova pasi, achisimudza cheni yeplate kuti arege kukuvaracompost Turner michina.
② Mukati meyese bvunzo yekumhanyisa maitiro, tarisa composting michina yekufambisa nekukurumidza kana paine ruzha rwechienzi.
③ Tarisa kana magetsi ekugadzirisa mashandiro anoshanda zvakanaka.
Pfungwa dzeKutarisa muChinese ndiro Komputa Turner Kushanda
Vashandi vanofanirwa kugara kure nemidziyo yekuisa manyowa, kudzivirira tsaona. Kutarisa kwakatenderedza compost Turner usati waisa kushanda.
▽ Mukugadzira, kugadzirisa uye kuzadza mafuta emafuta hazvibvumirwe.
▽ Kushanda zvakanyatsoenderana nemaitiro akatemwa. Izvo zvakanyatsorambidzwa kushanda munzira inopesana.
Vashandisi vasina hunyanzvi havabvumidzwe kushandisa muchina. Pamamiriro ekunwa doro, kusagadzikana panyama kana kuzorora kwakaipa, vanoshanda havafanire kushandisa iyo hex compost Turner.
▽ Dzese nzira dzewindow Turner dzinofanirwa kuvhurwa pasi kuitira kuchengetedza.
▽ Simba rinofanirwa kudimburwa kana uchitsiva slot kana tambo
▽ Kuchenjerera kunofanirwa kubhadharwa kucherechedza nekudzivirira iyo hydraulic cylinder yakadzika kwazvo kuti isakanganisa matako ekushandura kana uchimisa ndiro yeketani.
Zvinhu zvekuongorora usati watyaira
● Tarisa kuti zvisungo zvese zvakachengetedzeka here, uye kana kubviswa kwecheni yezvinhu zvekufambisa kwakakodzera. Chibvumirano chisina kukodzera chinofanira kugadziriswa munguva.
● Bhutter ekisero-mabheyari uye tarisa huwandu hwemafuta hwegiya uye hydraulic tank.
● Iva nechokwadi chekubatanidza waya kwakachengeteka.
Nguva yekuzorora yekuchengetedza
◇ Kubvisa zvisaririra pamushini nenzvimbo dzakatenderedza
◇ Lubricating ese lubrication mapoinzi
◇ Kucheka magetsi
Vhiki nevhiki zvinhu zvekugadzirisa
● Kuongorora oiri yegearbox uye kuwedzera mafuta anokwana.
● Kutarisa vanofambidzana vekutonga kabati contactor. Kana zvakuvara, chinja ipapo ipapo.
● Kutarisa huwandu hwemafuta e hydraulic box, uye kusimbisa mamiriro ekubatana kwenzvimbo dzemafuta. Kutsiva zvisimbiso panguva yakakodzera kana mafuta akadonha.
Nguva nenguva yekuongorora zvinhu
◇ Kuongorora mashandiro emota chinoderedza. Kana paine ruzha rwusina kujairika, kana kupisa, mira uye tarisa muchina ipapo.
◇ Kutarisa mabheyari kuti apfeka here. Mabhegi akasakara anofanira kutsiviwa.
Matambudziko Akajairika uye Dambudziko rekugadzirisa
Nzira dzekugadzirisa matambudziko
Zvigadzirwa zvemavara zvakasviba zvakanyanya Kubvisa zvidimbu zvisina kukwana
Miseve uye mashizha akaremara zvakanyanya
Kugadzirisa mashizha nemiseve
Iyo giya rakakuvara kana kunamira
Kusanganisira muviri wekunze kana
Kufamba hakuna kutsetseka,
yokuderedza neruzha kana nefivha
Pane zvimwe zvinhu pa
Kuchenesa zvimwe zvinhu
yokuderedza neruzha kana kupisa kwakanyanya
Kusava nemafuta ekuzora
Kuwedzera mafuta ekuzora
Zvakaoma kana kukundikana mu
kutarisisa mota, ichiperekedzana nekupopota
Kunyanyisa kupfeka kana kukuvara pa
Gear mugodhi kuva kutsauka
Kubvisa kana kutsiva nyowani
Voltage iri yakanyanya kuderera kana yakanyanyisa kukwirira
Kutangazve iyo compost Turner
mushure memagetsi zvakajairika
Kuderedza kushomeka kwemafuta kana kukuvara
Kutarisa chinodzora kuti uone
midziyo haigoni kumhanya
Kuongorora kana magetsi
Kusunga kubatanidza kwega kwega